Mayelana NATHI - I-CBD enokuthula
I-Tranquil Farms iyaziqhenya ngokuba ngumkhiqizi wemikhiqizo ye-CBD okuwukuphela kwayo emakethe evunywa yiFood Alliance, inhlangano engenzi nzuzo ibilokhu ibeka indinganiso yaseMelika yezolimo esimeme iminyaka engamashumi amabili.
Abalimi bethu balandela imihlahlandlela yezolimo eqinile futhi ephelele, eqinisekisa ukuthi I-CBD livela emapulazini avikela imvelo, alondoloze imithombo yemvelo futhi abhekelene nomphakathi. Lesi sitifiketi seFood Alliance sikhomba ukuthi ibhizinisi lepulazi, ihlathi, noma ezokuvakasha licwaningwe ngokwezinga eliqinile lesitifiketi elidinga izinyathelo ezinengqondo ekubhekaneni nokusimama kwemvelo, ezenhlalo nezomnotho isikhathi eside.
Akumangalisi ukuthi iTranquil CBD ingumthombo oyintandokazi wokuphila kahle kulabo abanakekela umzimba wabo nezwe labo.
E-Tranquil CBD, sikholelwa ukuthi ikhwalithi yethu ephezulu, imikhiqizo yezempilo engabizi kakhulu eyenziwe nge-CBD etholwe yi-hemp inikeza amakhambi emvelo angcono kakhulu okuthuthukisa impilo yonke nenhlalakahle yamakhasimende ethu.
KUPHELA OKUHLE KAKHULU
Imikhiqizo ye-CBD enokuthula akhiqizwa ngekhwalithi ephezulu, izitshalo ze-hemp ezivunwe ngobungcweti. Imikhiqizo yethu ayinayo i-GMO futhi ayiqukethe ama-pesticides, ama-herbicides, noma ama-fertilizer wamakhemikhali. Yonke imikhiqizo yethu ihlolwe ngama-laboratories avela eceleni futhi owoyela bethu baphephe ngokuphelele ukuthi bangasetshenziswa. Ngakho-ke uma ufuna imikhiqizo engcono kakhulu ye-CBD emakethe, ungabe usaqhubeka. I-CBD enokuthula iyimpendulo yakho! Vumela imikhiqizo yethu yekhwalithi yenze lula impilo yakho.
Umsebenzi wethu ukuletha imikhiqizo esezingeni eliphakeme ye-hemp cannabidiol (CBD) emakethe. Sisebenza ukufundisa abanye ngezinzuzo zokukhishwa kwe-hemp, futhi kuyinjongo yethu ukusebenzisa imikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kakhulu embonini ukusiza ukukhulisa impilo nenhlalakahle yamakhasimende ethu.
I-CBD EJwayelekile NE-HEMP FARMS